By မစ်ကီ 23 May 2019
ကိုရီးယားမင်းသားလီဗြောင်ဟွန်းနဲ့ ဇနီး လီမင်ဂျောင်းတို့ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အိမ်တလုံး ဝယ်ယူလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မေလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ အနုပညာလုပ်ငန်း ကိုယ်စားလှယ်တွေက “လီဗြောင်ဟွန်းနဲ့ လီမင်ဂျောင်းတို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ လော့စ်အင်ဂျလိစ်မှာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေ အလာများတဲ့ Universal Studios ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အိမ်တလုံးကို ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအိမ်မှာ မိသားစု ၅ ယောက်၊ ၆ ယောက်လောက် နေလို့ရတဲ့အိမ် ဖြစ်ပြီးတော့ ဒေါ်လာ ၂ သန်း တန်ဖိုးရှိပါတယ်” လို့ ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
အဲ့ဒီသတင်းတွေကို တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ လီဗြောင်ဟွန်းရဲ့ အေဂျင်စီ BH Entertainment က “မင်းသား လီဟာ ကိုရီးယားမှာ ပရိုမိုးရှင်းတွေ လုပ်ရတဲ့အတိုင်း ဟောလိဝုဒ်မှာ ပရိုမိုးရှင်းတွေ လုပ်နေရပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အမေရိကမှ နေထိုင်ဖို့ နေရာတခု လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲ့ဒီမှာ မကြာသေးခင်တုန်းက အိမ်တလုံးကို ဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်” လို့ မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ “G.I. Joe: The Rise of Cobra” ရုပ်ရှင်နဲ့ ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်လောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ မင်းသားလီဟာ “G.I. Joe: Retaliation” ၊ “RED 2” နဲ့ “Terminator Genisys” ရုပ်ရှင်တွေမှာ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကမှာ ပြုလုပ်မယ့် အနုပညာလုပ်ငန်းတွေရဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ သူ့ရဲ့ ကုမ္ပဏီက “ကျနော်တို့ဟာ လက်ရှိမှာ ဇာတ်ညွှန်းတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို သုံးသပ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်ရုပ်ရှင်ကိုမှ လတ်တလော မဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူး” လို့ ဆိုပါတယ်။ မင်းသားလီ ပါဝင်ထားတဲ့ ကိုရီးယားရုပ်ရှင် “Chiefs of Namsan” ကိုတော့ အခုနှစ်မှာ ပြသဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
မြောက်အမေရိက ရုံဝင်ငွေစာရင်းမှာ စံချိန်တင် ဝင်ငွေရရှိခဲ့တဲ့ “Detective Pikachu” ရုပ်ရှင်
Topics: ဒေါ်လာ ၂ သန်းတန် အိမ်, လီဗြောင်းဟွန်းတို့ ဇနီးမောင်နှံ